ikhaya » iindaba » I-Adorama ibonisa "i-Adorama Business Solutions"
I-Adorama ibonisa "i-Adorama Business Solutions"
ENew York, NY - Septemba 7, 2017 - Adorama, enye yeefoto ezinkulu zehlabathi, ividyo, i-audio, imaging kunye nabathengisi bekhompyutha, uyavuya ukuvakalisa ukuqaliswa Adorama
I ziShishino. Le nhlangano entsha yezo shishino-kwi-BhnumXB inika ii-studios,
abasasazo, amanethiwekhi, kunye nemfundo kunye namaziko karhulumente inxaxheba kweenkonzo zorhwebo ngezinga elikhulu, ukusuka kwindlela yokuthengisa yokubonisana nokuthengwa kwempahla kwiinkonzo zezobugcisa behlabathi kwi-post-sales post.
The Adorama Uphuhliso lweShishini lweShishini lubandakanya umthengi olawulwa ngumntu omnye
ubudlelwane, ukunika abathengi indawo edibeneyo yokuqhagamshelana nayo yonke imibuzo yomkhiqizo, ukuqinisa ngakumbi uxhulumaniso phakathi kwabathengi bamashishini kunye Adorama. Ukongezelela, i Adorama Iqela leZibonelelo zeeNkonzo zeCandelo lobuSebenzi bobugcisa bobuchule bobonelela kunikezela abathengi ngobungakanani obungalingani nobungakanani bobuchule bezobugcisa kwizixhobo, ukujongana neengxaki, iindlela zoshishino kunye noshintsho. Iqela leNkonzo yoBugcisa lingabandakanyeka kwiinkonzo ze-video kunye nokudibanisa kunye neenkonzo zofakelo, kunye nokuncediswa kobugcisa obuqhubekayo, okukunceda Adorama ukubonelela ngeenkonzo ze-360-degree, kunye nokunika inkxaso abathengi kwinqanaba ngalinye ekuboniswaneni kokuqala, ukuhanjiswa, ukuthunyelwa kweposi.
"Ngamava aneminyaka engaphezu kwe-40 ukunceda abenzi bokuqukethwe, ukusuka kubenzi befilimu abazimeleyo ukuba basasaze indawo, bavelise izixhobo ezifanelekileyo zeeprojekthi zabo, Adorama iyanconywa kakuhle ngokufuduka kwegama lethu lobuchwephesha phakathi kwabafotoli beefoto kwiinkalo ezibanzi zobungcali kwiinkonzo zabaxumi bamashishini, "kusho uBarry Litwin, CEO, Adorama.
"Nangona kunjalo Adorama Umbutho weSombululo zeShishini ngokwawo unobutsha olutsha, abathengi banokulindela inqanaba elifanayo lolwazi abaye bawaziyo nokwethemba kwabo Adorama, kodwa ngoku kwinqanaba leshishini ekusebenziseni i-audio-end-end end-audio, ividyo, iifoto kunye neemfuno zemveliso. "
Ed DeLauter, Adorama Isisombululo sezoShishino kwiCandelo leeNkonzo zobuGcisa, longeza, " Adorama Iqela leShishini zeShishini zeengcali ziyigunya eliphambili kwizicwangciso zeteknoloji zamashishini, urhulumente kunye namaziko emfundo, kwakunye nezibonelelo eziqhutywayo ezifana nezixhobo zezemidlalo nezindlu zonqulo. Njengoko imigangatho yoshishino iguqulwa ngokukhawuleza, izigqibo zifumana ezinkulu kunye ezinkulu, kunye ne teknoloji kakhulu, Adorama Isisombululo sezo shishino liza kunceda iinkampani ziyakwamkela kwaye zitshintshe ukutshintsha ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo, kwaye ngaphandle kokuphulaphula ibhajethi ebalulekileyo. "
Ukubonisana. Ukuthenga. Inkxaso: Iintsika ezintathu Adorama I ziShishino
Ukubonisana: Adorama Iisombululo zezoShishino zinika iiNkonzo zobuGcisa kunye nenkxaso ukususela ngelixa abathengi baqala ukuvavanya ukuthenga okukhulu, emva kokuba ukufakela kuqediwe. Oku kuqinisekisa ukuba imibutho ifumana izixhobo zesisombululo esifanelekileyo kwiimfuno zabo, ukusuka kwiikhamera kunye nokusasaza izixhobo zokukhanyisa kunye nezixhobo zokunikezela, kunye nayo yonke into ephakathi-kungakhathaliseki ukuba yintoni i-brand - kwaye iphumelele kuyo.
Ukuthenga: Ukongezelela ekunikezeni okukhethwa kukho ukukhokha, abathengi banokurhweba kwizixhobo ezisetyenziswayo ngemali okanye Adorama ityala elingasetyenziselwa ukusetyenziswa kwezixhobo ezintsha okanye eziphuculiweyo, kunye nokuqeshisa izicwangciso zomntu ngamnye okanye iikiti ezipheleleyo Adorama Inkampani yokuqashisa - indlela echanekileyo yendlela yokufumana izixhobo zokusebenza kuphela ngexesha elifunekayo.
inkxaso: Ukusebenza njengomlingani oyinyaniso kumashishini, abathengi banomphathi-akhawunti ozinikeleyo okhoyo ukuphendula imibuzo kwaye anike uncedo nangemva kokufakela. Iqela leNkonzo yoBugcisa lingabandakanyeka ukuncedisa ekuphunyezweni kwaye linika nezicwangciso zokuxhasa ukufikeleleka koqeqesho oluqhubekayo lobuchwepheshe.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe okanye ukucwangcisa ukubonisana kunye Adorama Iingcali zeShishini zezoShishino, nceda uqhagamshelane no absAdorama.com okanye tyelela iWww.Adorama.com / abs.
ADORAMA:Ngaphezu kweSitolo seKhamera
Adorama Ingaphezu kwesitolo sekhamera - enye yezona zifoto ezinkulu, ividyo, i-audio and computer. Ukukhonza amakhasimende ngaphezu kweminyaka eyi-40, Adorama Likhule ukusuka kwisitoreji sayo se-NYC isitoreji ukubandakanya indawo ehamba phambili ye-intanethi yokucinga kunye nabathengi ngekhompyutha. AdoramaIminikelo enkulu yemveliso ibandakanya ukuzonwabisa ekhaya, i-computer yekhompyutha, kunye nevidiyo enezobugcisa kunye nee-audio, ngelixa iinkonzo zayo zibandakanya i-lab ye-lab lebhu, AdoramaPix; izibonelelo kunye nejelo kubafoto-zithombe, abenzi befilimu, ii-studios zokuvelisa, ukusasazwa kunye nezindlu zendawo, kunye nokurekhoda abaculi Adorama Pro; Izixhobo zokusebenza zokuqeshisa Adorama Inkampani eqeshisayo; Kunye nokuwina Adorama Isiko lokuFunda, esinikeza imfundo yokudala yamahhala kwii-intanethi ezifana nezithandwa Adorama TV.
Adorama Lubhalwe njengenye yezona zihlanu eziphezulu zithengisi zee-electronics ngabaThengi bamaThengi, "I-Best Web" Forbes.com, Abathengisi be-Intanethi Phezulu i-100, kwaye nguMthengisi wezeMveliso we-Elephants of NY Giants.
utyelelo ADORAMA Kwi-www.Adorama.com.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli I ziSombululo ishishini-ukuya kwishishini izicwangciso zeendaba zoshishino yorhwebo shishini ukudityaniswa iinkonzo zobugcisa Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-09-13
Previous: Iindaba ze-IBC: I-Fortium ibonisa iMediaSeal® iNew Security Anti-Ransomware I-Aspe
next: I-Studio Manager kunye neNgcaciso yoMveliso
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Adorama ibonisa" i-Adorama Business Solutions "". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/adorama-unveils-adorama-business-solutions/. Enkosi.